Sawirro: Labo madaxweyne goboleed oo soo gaaray Muqdisho - Axadle - Axadle Wararka Maanta
Muqdisho (RBC) – Hogaamiyihii hore ee Axadle qaranka, iyo maalmaha soo socda ee la bilaabayo la-tashiga Qaranka looga raadinayo doorashada.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhoweeyay mas’uuliyiin hore oo soo gaaray Caasimadda Muqdisho, halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen safaf dhaadheer oo ay ku jiraan xildhibaanno, wasiirro iyo qeybaha bulshada.
Axmed Madoobe ayaa noqonaya madaxweynihii seddexaad ee soo gaara Caasimadda Muqdisho, iyadoo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, C / casiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) iyo wafdi uu hogaaminayo ay saaka soo gaareen Axadle.
Bone Gareen ayaa sidoo kale qeyb ka ah maamulada ka qeyb galaya la tashiga doorashada Raiisel wasaaraha ku dhawaaqay dhowaan Dowlada Federaalka Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, looga tashanayo dhamaan howlaha doorashada.
Madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhoweeyay masuuliyiin ka tirsan dowladda oo ay ka mid yihiin wasiiro, xildhibaano iyo saraakiil ciidan.
Madaxweynayaasha kale ee HirShabeelle iyo Puntland ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay soo gaaraan Axadle.
Sida muuqata, shirka ayaa goor dambe furmay, maadaama inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka aysan joogin Caasimadda Muqdisho sidii lagu balamay.
Wararka qaar oo ay heshay Axadle ayaa sidoo kale sheegaya in shirka ay u badan tahay inuu furmo maalinta Sabtida, maadaama berri ay tahay Jimco.
Sikastaba diyaar garowgii ugu dambeeyay ee Shirka Wadatashiga Qaran ayaa ka socda Magaalada Muqdisho waxaana la filayaa in xal la gaaro ka hor doorashada.
RASMI: Guuleystaha Abaalmarinta XIDDIGA SANADKA Ee Premier League Ee